Hlola iSpain - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eSpain.
Okufanele ukwenze eSpain.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseSpain
Bukela ividiyo ekhuluma ngeSpain
Hlola iSpain izwe elihlukile lihlanganyela i-Iberian Peninsula nePortugal ekugcineni ngasentshonalanga yoLwandle iMedithera. Yilelo lizwe elinenombolo yesithathu ngobukhulu yama-UNESCO World Heritage Sites, ngemuva Italy futhi China.
ISpain ithathwa njengezwe eliyisimanga eYurophu ngenxa yezakhamizi zayo ezinobungane, indlela yokuphila evuselelekile, ukudla okukulo, impilo ebusuku obumnandi, nemikhosi edume umhlaba wonke nemikhosi. Phakathi kwezindawo eziningi ezifanele ukuvakashelwa yinhlokodolobha yaseSpain echumayo Madrid, idolobha elisogwini elinempilo Barcelona, i- "Running of the Bulls" ePamplona, ​​amadolobha amakhulu e-Andalusia anezakhiwo zamaSulumane, njenge Seville, I-Granada neCórdoba, indlela ye-St James ne-idyllic Balearic futhi eCanary Islands.
Ngamabhishi amahle, impilo yobusuku obumnandi, izindawo eziningi zamasiko kanye namadolobha omlando, iSpain yenza indawo enhle yokuya kunoma yiluphi uhlobo lohambo. Izwe lokuhlukahlukana okukhulu kwezindawo namasiko, iSpain iyabamangaza labo abazi kuphela idumela layo ngamaholide amahle olwandle. Kukhona konke kusuka ezimfundeni eziphakemeyo nezintaba ezineqhwa kuya emabhishi amakhulu naseziwugwadule eningizimu empumalanga. Ngenkathi ihlobo liyinkathi yesibalo ngenxa yamabhishi, labo abafisa ukugwema izixuku kufanele bacabangele ukuvakasha ebusika njengezinto ezikhangayo njenge-Alhambra eGranada naseLa Gran Mezquita eCordoba ngeke zigcwale amanzi.
ISpain inamadolobha amaningi athakazelisayo.
Madrid - inhlokodolobha esebenzayo, enamamyuziyamu amnandi, ukwakhiwa okuhle, ukudla okuhle nokuphila ebusuku
Barcelona - Idolobha lesibili laseSpain, eligcwele izakhiwo zesimanjemanje nempilo ethandekayo yamasiko, amakilabhu asebusuku, namabhishi
Bilbao - idolobha lezimboni, ikhaya eliseGuggenheim Museum
I-Cadiz - idolobha elidala kunawo wonke eWestern Europe elineminyaka ecishe ibe ngu-4,000, ligubha umkhosi odumile
Cordoba - IGreater Mosque ('Mezquita') yaseCordoba ingesinye sezakhiwo ezinhle kakhulu emhlabeni
IGranada - idolobha elihle ngokubabazekayo eningizimu, elizungezwe izintaba zeqhwa zaseSierra Nevada, ikhaya laseLa Alhambra
Seville - idolobha elihle, elinesithunzi, nekhaya kuya esontweni lesithathu ngobukhulu emhlabeni
Valencia - I-paella yasungulwa lapha, inebhishi elihle kakhulu
IZaragoza - idolobha lesihlanu ngobukhulu eSpain
ICosta Blanca - i-200 km yogu olumhlophe enamabhishi amaningi nemizana emincane
ICosta Brava - ugu olugudle olwandle olunezindawo eziningi zokungcebeleka zolwandle
ICosta del Sol - ugu olunelanga eningizimu yezwe
Gran Canaria - eyaziwa ngokuthi “izwekazi elincane” ngenxa yezimo zezulu zalo eziningi nezinhlobonhlobo
Ibiza - isiqhingi seBalearic; enye yezindawo ezinhle kakhulu zokubumbana, ukugoqa, nama-DJs emhlabeni wonke
I-La Rioja - i-Rioja newayini namathrekhi we-dinosaur wezinsalela
IMallorca - isiqhingi esikhulu kunazo zonke samaBalears, esigcwele amabhishi amangalisayo nobusuku obukhulu bokuphila
ISierra Nevada - izintaba eziphakeme kakhulu ePeninsula yase-Iberia, enhle ngokuhamba nokushibilika
Tenerife - Inikeza amahlathi aluhlaza, iziloba nezimila ezingajwayelekile, ugwadule, izintaba, izintaba-mlilo, izindawo ezinhle ezisogwini namabhishi amangalisayo
Isiphathamandla sezwe eSpain yi-Iberia.
Izikhumulo zezindiza ezixakeke kakhulu yiMadrid, iBarcelona, ​​iPalma de Mallorca neMalaga, kulandele yona Seville, Valencia, Bilbao, Alicante, Santiago de Compostela, Vigo, Gran Canaria kanye ne-2 isikhumulo sezindiza eTenerife.
IMadrid, iBarcelona neBilbao zinezindawo zezindiza ezinhle kakhulu, eziklanywe ngabaklami abadumile.
Uma uhlela ukuzungeza amadolobha amakhulu noma uhlole futhi kude uzothola izinkampani eziningi ezihlinzeka ngokuqasha izimoto ngamanani ashibhile ngenxa yokuncintisana okuphezulu phakathi kwezinhlangano eziqashisa izimoto, cabanga ukuqasha imoto nge-GPS navigation-kuzoba lula kakhulu ukuyishayela ukuba nemephu yezimoto.
Amabhishi athandwa kakhulu yilawo asezintabeni zaseMedithera naseCanary Islands. Okwamanje, ukuhamba ngezinyawo, izintaba zaseSierra Nevada eningizimu, iCentral Cordillera nePyrenees enyakatho yizindawo ezinhle kakhulu.
Amadolobha omlando kanye neminyuziyamu yaseSpain
ISpain inemikhosi eminingi yasendaweni okufanele uyihambele.
UFeria de Abril (Sevilla ngo-Ephreli / Meyi) - Kuhle kakhulu endaweni yonke yase-Iberia eheha izinkulungwane zabantu abavela kuwo wonke umhlaba. Uma ujabulele inganekwane, i-flamenco, ukudansa nokuphuza, lena yindawo yakho.
USevilla noSemana Santa's Semana Santa (IPasika) - kufanelekile ukukubona. Kusuka eSontweni LasePalm kuya ngeSonto langePhasika. Izindlela eziningi zokudlikiza zenzeka phakathi kwalelo sonto. Isonto elingcwele (Isonto lePhasika) - okungcono kakhulu eSeville nase-Andalusia yonke; futhi kuyathokozisa eValladolid (izindwendwe ezithulele) kanye neZaragoza (lapho kudlalwa khona imigqomo yamakhulu ezigcawini)
ICórdoba en Mayo (Cordoba ngoMeyi) - inyanga enhle yokuvakashela idolobha laseNingizimu
I-Las Cruces (isonto le-1st ngoMeyi) - iziphambano ezinkulu ezenziwe ngezimbali ezihlobisa izinkundla zomphakathi enkabeni yedolobha, lapho uzothola khona nomculo ebusuku nokuphuza futhi abantu abaningi bazijabulisa!
I-festival de Patios - enye yemibukiso yamasiko ethokozisayo, amaviki e-2 lapho abanye abantu bevula iminyango yezindlu zabo ukukhombisa uPatios wabo omdala ogcwele izimbali
U-Arde Lucus - umkhosi omkhulu wokuzijabulisa wase-Europe, wonke ngaphakathi kwedolobha elibiyelwe ngodonga laseLugo, Amagugu Womhlaba wonke we-UNESCO. Ngempelasonto edlule ngoJuni.
ICata del Vino Montilla-Moriles - ukunambitheka kakhulu kwetende elikhulu enkabeni yedolobha phakathi nesonto elilodwa ngoMeyi
UDia de Sant Jordi - ICatalan kumele, ngo-Ephreli 23th Barcelona ihlanganiswe nama-roses yonke indawo futhi kutholakala iziza ezithengiswa ngencwadi eRambla. Kukhona futhi ukusayinwa kwencwadi, amakhonsathi nezithombe ezahlukahlukene.
UFallas - Umkhosi kaValencia ngoMashi - ukushisa i- “fallas” kumele
I-August Fair kaMálaga - ukudansa kwe-flamenco, ukuphuza i-sherry, izinkabi zezinkunzi
ISan Fermines - ngoJulayi ePamplona, ​​Navarra.
IFiesta de San Isidro - UMeyi 15 eMadrid - umgubho wosanta wokuqina weMadrid.
I-Carnival - okungcono kakhulu Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas noCádiz
UCabalgata de los Reyes Magos (Amadoda amathathu ahlakaniphile avela) - ngosuku olwandulela epiphany, i-5th kaJanuwari, ubusuku ngaphambi kokuba izingane zaseSpain zithole izipho zazo zikaKhisimusi, kunetha amaswidi namathoyizi kuwo wonke amadolobha amadolobhana
ISan Sebastian International Film Festival - ebanjwa minyaka yonke eSan Sebastian, idolobha elihle ezweni laseBasque, ngasekupheleni kukaSepthemba
La Tomatina - impi enkulu yamatamatisi eBuñol
UMoros y Cristianos (amaMoor namaKristu, atholakala kakhulu eSpumalanga-mpumalanga yeSpain ngesikhathi sentwasahlobo) - izindondo “nezimpi” ezikhumbula izimpi zeminyaka ephakathi
Imikhosi ye-85 eGalicia unyaka wonke kusuka ewayinini kuya emahhashini asendle.
I-Vías Verdes ku: Ukuhamba ngebhayisekili kusuka ePyrinees kuya ogwini lweMedithera: ukubuya ngempelasonto
Lesi yisipiliyoni esihlanganisa imvelo nemidlalo, sinamazwe ahlukene we-2: izintaba zasePyrenees kanye neMedithera Costa Brava, izindawo ezishaywayo lapho abashadikazi nabakwamanye amazwe baya khona, kunikeza ukudla okumnandi kwaseCatalan nokuqedela ukubhukuda eMedithera nokudla ukudla kwaseMedithera. Izindlela ezi-Green-Way, ezaziwa nangokuthi i-Vías Verdes ngeSpanishi, yimizila yakudala yesitimela etholiwe futhi iphinde yabuyiselwa kulabo abahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisekili. Ziyindlela enhle yokuthola iSpain. Zilula ukufinyelela kuzo futhi njengoba izitimela sezizungezwe ngalezi zindlela, azikho Ngakho-ke kungumsebenzi omuhle wazo zonke ubudala namazinga omzimba. Kukhona amakhilomitha we-1,800 e-Vías Verdes kulo lonke elaseSpain. Ukutholakala kalula kweVías Verdes ngesitimela. Sekukonke, kuzoba ne-138 km yokuhamba ngebhasikidi ngempelasonto eyodwa. Loluhambo luqala ePyrenees bese luphela emabhishi eCosta Brava. Kuze kube yilapho uGirona amathafa emvelo emile, eluhlaza, emanzi futhi ungazizwa unemvelo yangempela. Uwela imizana emincane nemifula. Ngemuva kweGirona amadolobha abe makhulu futhi kunezingxenye ezithile ezibukeka zithuthuke kakhulu. Kepha njengoba usondela emaphethelweni, eSant Feliu de Guíxols, indawo ebabazekayo iya ngokuya iba yiMedithera futhi uqala ukuhogela izihlahla zikaphayini ngokuqinisekile nolwandle. Ingxenye enzima yohambo inyukela emgodini weSantigosa (egqumeni leSantigosa). Endleleni kunamathuba amaningi okuhlala emakhaya asemakhaya futhi uhlangabezana nokuphila kwendawo yangempela. Uma unesifiso sohambo olunjengalolu othintana naye: www.spainforreal.com
Ukungena e: Los Mallos (Aragon) nase Siurana (eduze Barcelona)
IMidlalo ye-Whitewater e: Campo, Murillo de Gallego (Aragon)
Ukuhamba ngezinyawo eGalicia
Ukushushuluza phansi. Kunezindawo eziningi zokugcina ezokushushuluza ehle eSpain.
Ukushushuluza esifundeni esenyakatho yeSpain
Ukuze uthole ukwelashwa, zama uCosta Brava nomhlaba owaziwayo eCanary Islands.
Amakhadi wesikweletu: Amakhadi wesikweletu amukelwa kahle: ngisho nasendaweni yokuthengisa emakethe yaseLa Boqueria e-Barcelona, ​​esiteshini esikhulu senjini esisezingeni eliphakathi nezwe, noma emadolobheni amancane njenge-Alquezar. Kunzima ngokwengeziwe ukuthola indawo lapho ikhadi lesikweletu lingamukelwa eSpain.
Ama-ATM amaningi azokuvumela ukuthi ukhiphe imali ngekhadi lakho lesikweletu. Izitolo eziningi zaseSpain zizocela i-ID ngaphambi kokwamukela ikhadi lakho lesikweletu. Ezinye izitolo zingemukele ilayisense lokushayela kwelinye izwe noma ikhadi lomazisi futhi kuyodingeka ubonise ipasipoti yakho. Lesi silinganiso senzelwe ukusiza ukugwema ukukhwabanisa kwamakhadi wesikweletu.
Amabhizinisi amaningi (kufaka phakathi izitolo eziningi, kodwa hhayi izindawo zokudlela) asondele ntambama phakathi kwe-13: 30 / 14: 00 futhi avule kabusha kusihlwa ezungeze i-16: 30 / 17: 00. Ukukhishwa kuyizitolo ezinkulu noma izitolo ezinkulu zamaketanga.
Kubantu abaningi baseSpain, kwasemini ukudla okuyisisekelo kosuku futhi uzothola imigoqo kanye nezindawo zokudlela ezivulekile ngalesi sikhathi. NgeMigqibelo, amabhizinisi kwesinye isikhathi awavuli futhi kusihlwa futhi cishe yonke indawo ivaliwe ngamaSonto. Okuhlukile kuyinyanga kaDisemba, lapho izitolo eziningi zikhona Madrid futhi Barcelona izovuleleka njengasendlini phakathi nesonto ngamaSabatha kuye kuzongena imali ngesikhathi samaholide. Futhi, amahhovisi amaningi omphakathi namabhange awavuli futhi kusihlwa ngisho nangezinsuku zaphakathi nesonto, ngakho-ke uma unanoma yiliphi ibhizinisi elibalulekile ongalinakekela, qiniseka ukuthi uhlola amahora wokusebenza.
Ngaphandle kwemikhiqizo yobunikazi eyaziwayo eyaziwa emhlabeni wonke (Zara, Mango, Bershka, Camper, Desigual), iSpain inemikhiqizo eminingi yokwakha okunzima kakhulu ukuyithola ngaphandle kweSpain- futhi ingakufanelekela ukubheka uma uthenga imvunulo yomqambi ngenkathi uhamba.
Ukuthi uzodlani eSpain
Ukubhema kuvinjelwe kuzo zonke izikhala zomphakathi ezivalekile nezindawo osebenza kuzo, ezokuhamba zomphakathi, nasezindaweni zomphakathi ezingaphandle kwezibhedlela nasezindaweni zokudlala. Ukubhema kuvinjelwe ezingxenyeni ezingaphandle zamabha nezindawo zokudlela. Ukubhema kuvinjelwe emisakazweni yethelevishini.
I-Alhambra, iGeneralife ne-Albayzín, eGranada
Isikhungo Somlando Cordoba
Isigodlo Nesiza se-Escurial, eMadrid
Imisebenzi ka-Antoni Gaudí
Umgede we-Altamira ne-Paleolithic Cave Art yaseNyakatho Spain
Izikhumbuzo ze-Oviedo noMbuso wama-Asturias
Idolobha Elidala lase-ilavila namasonto alo e-Extra-Muros Churches
Idolobha Elidala laseSegovia kanye ne-Aqueduct yalo
ISantiago de Compostela (Idolobha Elidala)
Idolobha elingokomlando laseToledo
Ukwakhiwa kweMudejar kwe-Aragon
Idolobha Elidala LaseCáceres
Cathedral, Alcázar kanye ne-Archivo de Indiaas eSeville
Idolobha elidala laseSalamanca
I-Archaeological Ensemble yaseMérida
Imizila yeSantiago de Compostela: ICamino Francés Nemizila YaseNyakatho yeSpain
I-Royal Monastery yaseSanta María de Guadalupe
Idolobhana laseWalled Town laseCuenca
I-La Lonja de la Seda de Valencia
I-Palau de la Música Catalana kanye neSibhedlela de Sant Pau, Barcelona
ISan Millán Yuso kanye ne-Suso Monasteries
Ama-Prehistoric Rock Art Sites esiqiwini saseCôa naseSiega Verde
I-Rock Art yeMedithera yaseMedithera eNhlonhlo Yase-Iberia
Inyuvesi ne-Precinct Yomlando wase-Alcalá de Henares
I-Archaeological Ensemble yeTárraco
Isiza Sokuvubukula kwe-Atapuerca
AmaCatalan Romanesque Churches weVall de Boí
Izindonga ZaseRoma zaseLugo
I-Aranjuez Cultural Landscape
I-Renaissance Monumental Ensembles ye-Úbeda neBaeza
Umhlaba Wamasiko weSerra de Tramuntana
Amagugu eMercury. U-Almadén no-Idrija
Isiza se-Antequera Dolmens
ICaliphate Idolobha laseMedina Azahara